कतै मेरो गर्भ नरहने त होइन ? - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
विवाह भएको तीन वर्ष भए पनि श्रीमान्सँगै हुनुहुन्छ वा अलग्गै बस्दै आउनुभएको छ ? पत्रबाट स्पष्ट भएन। तपाइर्ंले सुरुमा सन्तान नचाहेकाले परिवार नियोजनको साधन रोज्नुभयो कि भएन वा कुन साधन प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। समान्यत: श्रीमान्सँगै दुई वर्ष बस्दा वा नियमित (हप्तामा ३ पटक वा त्यसभन्दा बढी) यौनसम्पर्क गरेको र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरेको खण्डमा ८० प्रतिसत दम्पतीमा गर्भ रहन्छ। २० प्रतिशतमा मात्र गर्भ नरहने हुनसक्छ। गर्भ नरहनुको कारण महिला, पुरुष वा दुवैमा विद्यमान हुनसक्छ। यो अवस्थामा चिकित्सकसँग भेटेर केही परीक्षण गराउनुपर्ने हुन सक्छ। तपाईंले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु राम्रो होला। धेरै अवस्थामा सजिलै गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ। तपाइर्ंको उमेर धेरै नभएकाले खासै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन।